कोहली किन भए रोनाल्डोको फ्यान ? - सबै खेल
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट गसिप
१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार २३:४७ August 3, 20190Comments ronaldo, virat kohli
वर्तमान विश्व क्रिकेटको उत्कृष्ट ब्याट्सम्याना हुन्, भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली । उनी अहिले भारतीय टिमको नेतृत्व गर्दै वेस्टइन्डिज भ्रमणमा छन् । तिनै कोहली फुटबलको पनि मजा लिन्छन् ।
युभेन्टसका पोर्चुगिच स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई आफ्नो प्रेरणाको स्रोत मान्छन्, कोहली । फिफा डटकमसँग कुरा गर्दै कोहलीले चुनौतिको सफलतापूर्वक सामना गर्ने रोनाल्डोबाट आफू प्रभावित भएको र त्यसलाई खेलमा प्रेरणा मिलेको बताएका छन् ।
क्रिकेटसँगै फुटबललाई पनि नजिकबाट निहाली रहेका कोहली थुप्रै फुटबल मन पर्ने भएपनि आफूलाई रोनाल्डो प्रिय लाग्ने बताउँछन् । फिफा टडकमसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘मेरा लागि रोनाल्डो सबैभन्दा माथि छन् । उनको प्रतिबद्धता र अनुशासन एकदमै राम्रो छ । त्यो तपाईंले उनको हरेक खेलमा देख्न सक्नु हुन्छ । उनी जुन क्लबमा खेल्छन् म ती क्लबको समर्थन गर्छु । त्यसले मलाई प्रेरित गर्छ ।’
बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेसी र रोनाल्डोमा को उत्कृष्ट भन्ने प्रश्नमा कोहलीले भने, ‘रोनाल्डो, मेरो विचारमा उनले धेरै चुनौतिको सामना गरेका छन्, र त्यसमा सफल पनि भएका छन् । रोनाल्डो पूर्ण खेलाडी हुन् । उनी उत्कृष्ट छन् र हरेकका लागि प्रेरणाका स्रोत हुन् । धेरैले उनको जस्तो गर्नै सक्दैनन् । उनी लिडर हुन्, त्यसैलै मललाई उनी एकदमै मनपर्छ ।’
ब्राजिलका रोनाल्डो, रोनाल्डिन्हो, ओलिभर कान, लुका मोड्रिच, जाभी, इनेस्टा र मेसीको पनि आफू प्रसंशक भएको कोहलीले बताए । उनले मेसी र रोनाल्डोको स्थान फ्रान्सका किलियन एम्बाप्पे लिन सक्ने बताए । उनले भने, ‘२०१८ को विश्वकपमा प्रिक्वार्टर फाइलनमा अर्जेन्टिनाविरुद्ध एमबाप्पेको खेल कसैले बिर्सन सक्दैन । उनी क्षमतावान र उत्कृष्ट खेलाडी हुन् ।’
कोहलीले सन् १९९८ र २००२ को विश्वकपमा ब्राजिलको खेल एकदमै उत्कृष्ट थियो । ब्राजिलका रोनाल्डो महान खेलाडी भएको र उनको बलसँगको स्किल र क्षमता उत्कृष्ट भएको कोहलीले बताएका छन् ।
← बायर्नको नजर सानेमा
जिरोबाट हिरो बनेका स्ट्राइकर ! →
टेस्ट क्रिकेटबाट हाफिजको सन्यास
१९ मंसिर २०७५, बुधबार ११:३० 0
एक खेल बाँकी छँदै भारतले जित्यो सिरिज
१५ माघ २०७५, मंगलवार ०१:३३ 0